မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အဖြေများ - အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အဖြေများ - အပိုင်း (၂)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 7, 2015 at 18:06 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင်အပတ်တွင် စတင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွင် မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းများထဲမှ "Be" ၊ "Future perfect continuous" နှင့် "and Vs. as well as" များကို အသုံးပြုပုံရှင်းလင်းဖြေကြားချက်များကို အောက်မှာ ဖြေကြားပေးလိုက်ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါမှာ(အခြေခံအကျဆုံး) ဝါကျတည်ဆောက်ပုံကို ကြည့်ရင် subject + verb + object ဆိုပြီးမှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ verb တွေအပြင် verb ရဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပေးနေတာက verb to be ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ verb to be ထဲမှာ ပါတာတွေကတော့ am, is, are, was, were, be, being, been တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိကတာဝန်တွေကတော့ questions မေးခွန်းဖွဲ့တာ ၊ passive voice နဲ့ ရေးတဲ့အခါ၊ progressive လို့ ခေါ်တဲ့ -ing ပုံစံနဲ့ ရေးတဲ့အခါ စတာတွေမှာအတွေ့များပါတယ်။ အခြားအသုံးတွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ Be ရဲ့ အနောက်က noun, adjective, adverb အားလုံးတွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ရင် ရှင်းသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Obama is the president of US.
Be + V-ed/en (passive voice)
The house was build in 1990.
The street is called Bo Gyoke Street.
The bike was made in the USA.
Be + poposition phrase
Ko Soe and his wife are from Mandalay.
Asastudent, he was always happy. (အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတယ်)
They were never on time. (ဘယ်တော့မှ အချိန်မမှန်)
Future perfect continuous tense ကို ဒီလိုသရုပ်ခွဲကြည့်ရအောင်။ Future = ရှေ့လာမည့်ကာလ + Perfect Continuous = ရောက်ရှိနေသည့် ကာလမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို (ထိုကာလတစ်ခုအထိ) ဆက်တိုက် ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဆိုပြီးအလွယ် မှတ်လိုက်ကြပါစို့။ ဆိုလိုတာက အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို နောင်အချိန်မှာလည်းဆက်လက်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင် သုံးပါတယ်။
ဥပမာ - ကျွန်တော် အခုစာစကျက်တယ်။ နောက်ထပ် ၅ နာရီအကြာမှာ ကျွန်တော် သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးနီးပါးပြီးလောက်ပြီလို့ ဆိုလိုချင်ရင်
I will have been studying the whole chapter in five hour's time.
နောက်ထပ် ဥပမာတွေ ပေးရမယ်ဆိုရင်….
He will have been driving for an hour by the time he gets home. (အိမ်ရောက်ချိန်မှာ ၁ နာရီလောက်မောင်းခဲ့ ရလောက်တယ်။)
In December, I will have been working here for two years. (ဒီဇင်ဘာဆိုရင် ဒီမှာအလုပ်လုပ်လာခဲ့တာ ၂ နှစ်တောင် ရှိတော့မယ်)
How long will you have been studying when you get your degree? (ဘွဲ့ရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်စာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးလောက်ပြီလဲ။ - ဘယ်နှနှစ် ကျောင်းတက်ခဲ့လိုက်ရမလဲ)
ခြုံပြောရရင် ရှေ့ကာလတစ်ခု(Future) ရောက်ရင် မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ် (ပမာဏ) (perfect = complete) ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ ကို (been + V-ing) နဲ့တိုင်းတာပြောဆိုိတာပေါ့နော်။
And နှင့် as well as တို့ဟာ အပေါ်ယံကြည့်ရင် တူတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ မတူညီပါဘူး။ And က သူ့ရှေ့ကရော နောက်ကပါ လာတဲ့ စကားလုံး ၊ စကားတွဲ ၂ ခုကို ပေါင်းစည်းပေးကာ compound လုပ်ပေးပြီး၊ as well as ကတော့ ရှေ့ကစကားလုံးနဲ့ နောက်ကစကားလုံးကို သီးခြားစီတွဲပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
John and Mary want to attend the course. (သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးသင်တန်းတက်ချင်တယ်။)
John as well as Mary wants to attend the course. (John က သင်တန်းတက်ချင်တယ်။ Mary ရောဘဲပေါ့။) ဒါကြောင့် ဒီစာကြောင်းရဲ့ verb က singular ဖြစ်ရမယ်။
And က လူ ၂ ယောက်စလုံး ကို ပေါင်း ပြီး action ၁ ခုကိုဖော်ပြတယ်။
As well as က လူ ၁ ယောက်စီရဲ့ သီးခြား action တွေ ကိုဖော်ပြတယ်။
Jack and Jill are coming.
Jack as well as Jill is coming.
ပထမဥပမာက -Jack နဲ့ Jill တို့ အတူတူလာကြမယ်။
ဒုတိယဥပမာက - Jack လာလိမ့်မယ်။ Jill လည်း လာလိမ့်မယ်။ (သပ်သပ်စီလာကြမှာ)
အဲ့ဒီတော့ and နဲ့ as well as ကွဲပြားပုံကိုနည်းနည်းမြင်လောက်ပြီပေါ့နော်။
As well as နည်းတူ together with တို့ along with လည်း and နဲ့မတူကြဘူးနော်။ ဒါကြောင့် and အနေနဲ့ သုံးရမယ့် နေရာတွေမှာသူတို့ကို မသုံးမိဖို့ သတိပြုရမယ်နော်။
Permalink Reply by Mj Ani on September 8, 2015 at 10:48
Simplest Sentence Construction ​တွေကို ဥပမာနဲ့တကွ တစ်​ခုချင်း​ဖော်​ပြ​ပေးပါရှင့်​
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 14, 2015 at 17:11
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော် မေးခွန်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ တွင် မေးမှသာ ဆရာများမှ ပြန်လည် ဖြေဆိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Isabella Swift on September 8, 2015 at 11:18
Upလို့တစ်လုံးတည်းဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ တော်တော်များများ သုံးနေကြလို့ပါ
Permalink Reply by Khin Myo Aey on September 8, 2015 at 11:27
Thank you so much MYANMAR NETWORK TEAM. Welcome your programs.
Permalink Reply by San Lwin on September 8, 2015 at 22:01
အတူတူ ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ကား နှင့်ဖြစ်စေ ၊ ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ခြေလျှင်ဖြစ်စေ လိုက်ပို့ပေးတာကို Pick Off လို့ သုံးလို့ရပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Bring လို့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သွားကြိုတာကိုတော့ Pick up လို့သုံးပြီး အဲဒါတွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Chaw Su Thwel on September 10, 2015 at 10:30
Permalink Reply by Thu Zar on September 10, 2015 at 14:12
Permalink Reply by Wel Thar Gan on September 10, 2015 at 22:51
Permalink Reply by Kyaw Zaw Oo on September 12, 2015 at 11:44
Permalink Reply by Daw PeTi on September 13, 2015 at 22:34